एसपिपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय। - Malayakhabar
होम पेज फिचर एसपिपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
एसपिपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
काठमाडौं:= सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपिपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
एसपिपी सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने आशंका व्यक्त भइरहँदा सरकारले पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित सत्ता गठबन्धनका वामपन्थीसहितका दलले एसपिपी अस्वीकार गर्न दबाब दिएका थिए। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपिपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अघिल्लो लेख बालेन साहले स्थानीय चुनावमा कति गरे खर्च ? [विवरण]
पछिल्लो लेख सुन्दरी प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार आरोपित मनोज पाण्डे जेल चलान।
के विवाह पूर्वनै कसैसंग यौन सम्पर्क भएको थाहा पाउन सकिन्छ ?
गठबन्धनका शीर्ष नेता निजगढमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा।
बलिउड अभिनेता शाहरूख खानको फिल्म ‘डन ३’ मा चर्चित पोर्नस्टारको इन्ट्री!
मलाया खबर न्युज डेस्क - July 2, 2022
काठमाडौं:= यौन एउटा यस्तो बिषय हो । जो सबैलाई आवश्यक छ तर कसैले पनि खुलेर कुरा गर्न सक्दैन । अझ नेपाल जस्तो देशमा त...
बारा:= गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बाराको निजगढमा पुग्नुभएको छ । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको स्थलगत अध्ययनका लागि उहाँहरु शनिवार निजगढ पुग्नुभएको हो । सो क्रममा...
मुम्बई (एजेन्सी) := बलिउडका बादशाह शाहरुख खानसँग काम गर्ने सपना कसको हुँदैन र ? सात समुन्द्र पार भएर पनि मान्छेले यस्तो सपना देख्छन् ।...
अवैध सुन कारोबारको कसुरमा कैयौं व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर।
काठमाडौं:= राजस्व अनसुन्धान विभागले राजस्व छलीको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका-१५ रामबजार वस्ने २५ वर्षीय रमेश...
अन्य देशको काजुदेखि कटुससम्म किनेर खान्छन् नेपाली, गएको ११ महिनामा सुपारी १ अर्बको आयात।
-रमेश लम्साल र नवीन पौडेल काठमाडौं:= नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका...